ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ကျမ အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီ ဆိုတဲ့ မနန်းအောင်ထွေးကြည်
ကျမ အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီ ဆိုတဲ့ မနန်းအောင်ထွေးကြည်
မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသူ နန်းအောင်ထွေးကြည် မြန်မာပြည် ပြန်ခွင့်ရပြီ
ABSDF မြောက်ပိုင်းကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားများသတ်ဖြတ်မှုဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သူ နန်းအောင်ထွေးကြည်အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ၄င်း၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားချက်အရသိရသည်။
မြန်မာပြန်ခွင့်ရရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နန်းအောင်ထွေးကြည်က ၄င်း၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ““ ကျမ အိမ...See More
Unlike · · Share · November 2, 2012
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, Ye Myint and 258 others like this.
Moe Hein ထွန်းအောင်ကျော်ကလူသတ်သမားဆို ခုနန်အောင်ထွေးကြည် ကကျေးဇူးတင်တယ်ပြောနေပြန်ပြီ ရှုတ် ကုန်ပြီ သမိုင်းအမှန်ရှင်းကြပါ ဦး မိုးသီးဇွန် တို့တော့မယုံဘူး အခွင့်အရေးသမားတွေပြန်မလာနဲ့
November 2, 2012 at 10:24pm · Like · 1
Myo Khon Koh သမိုင်းကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပါဦးကိုမိုးဟိန်းရဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က. ABSDF ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့တာ ၈၈ ၈၉ ကာလတိုလေးပါ သူပြီးမှမိုးသီးဇွန် နောက် ဒေါက်တာနိုင်အောင် လူသတ်မှုတွေကနိုင်အောင်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ
November 2, 2012 at 10:38pm · Like · 9
Moe Hein မိုးသီးဇွန် နိင်အောင် တို့ လူသတ်သမားပေါ့? ok ရှင်းပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်myo khon koh
November 2, 2012 at 10:50pm · Like · 3
Ko Aung Chan ထွန်းအောင်ကျော်က ABSDF(NB) ရဲ့ဥက္ကဌ ပါ။ ပါဂျောင် လူသတ်ပွဲမှာ အသတ်ခံ ခဲ့ရပါတယ်။
November 2, 2012 at 10:52pm · Like · 3
Hero Yan Naing အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ကြိုဆိုနေမယ်နော်
November 2, 2012 at 10:53pm via mobile · Like · 2
Hero Yan Naing သူငယ်ချင်းတို့ ဒီသမိုင်းရဲ့တရားခံကို တို့မမေ့သင့်ဘူး
November 2, 2012 at 11:20pm via mobile · Like · 1
Nyi Nyi Htwe မိသားစုတွေမျော်နေရတဲ့ ကာလတွေမှာ ထပ်တူ ခံစားရပေမဲ့ ယခုသတင်းကြောင့် မိသားစုနဲ့ ထပ်တူမဟုတ်တောင် မလျှော့တဲ့ ၀မ်းသာမှုနဲ့အတူဝမ်းသာရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်၇င် ABSDF မြောက်ပိုင်းက အထုပ်ရှုပ်တွေ အကြောင်း (ဲဖြစ်နိုင်ရင် ABSDF ဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Dr. နိုင်အောင် ၊ မိုးသီးဇွန် တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မပီသမှုတွေအပါအ၀င်) သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးတခုလောက် လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ နောက်ပိုင်း လူငယ်တွေ တကယ့်သမိုင်းကြောင်းကိုသိလာမှာပါ။
November 2, 2012 at 11:30pm · Like · 6
Nang Kyaw welcome home..nang
November 3, 2012 at 12:02am · Like · 2
Ah Mar Ni မြောက် ပိုင်းအမှု့ အတွက် အားတခုပါ
November 3, 2012 at 12:19am · Like · 3
Myanmar Tharkaung အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ဒီလအတွင်း မြန်မာပြည်ကို လာမည်
November 3, 2012 at 12:26am · Like
Tun Tun Win နိုင်အောင် နဲ့အောင်နိုင်၊ထွန်းအောင်ကျော် ၂ယောက် နဲ့ လွဲကုန်ပါ့ မယ်။
November 3, 2012 at 1:10am via mobile · Like · 4
Win Naing i hate ABsdf because when i read khitthithinths koethaung ponepyin.
November 3, 2012 at 2:37am · Like · 1
Aung Pan Chitthu ကြိုက်တယ်ဟေ့လုံးဝဖိုက်တာပဲနော်.....
November 3, 2012 at 2:51am · Like · 1
Koaungkolatt Aungkolatt ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ-----
November 3, 2012 at 2:55am via mobile · Like · 1
Kyawnaing Oo မွေး နေ့ အမှီ ပါ ဆိုခွင့် က မရ ဘူး
November 3, 2012 at 5:00am · Like · 1
Han Thein မင်းတို့ စစ်ကျောရေးမှာ သေတာ ဒါထက်များသေးတယ် ။
November 3, 2012 at 5:08am · Like
Thant Oo ထားခဲ့တဲ့ စေတနာနဲ့ ပြုခဲ့တဲ့ ကံတွေအတွက်...ကျန်တဲ့ ဘ၀ သက်တမ်းတစ်လျောက် ထာဝရ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နှိုင်ပါစေဗျာ...။
November 3, 2012 at 7:26am · Like · 1
San Dar ကြိုဆိုပါတယ်မနန်း.. ကိုထွန်းအောင်ကျော်လဲရောက်ရာဘဝကနေ မနန်းအတွက်ဝမ်းသာနေမှာပါ.. မြန်မာကိုပြန်ရောက်ရင်သာ သမိုင်းမှန်ကိုလူအများသိအောင်ထုတ်ဖေါ်ပေးပါ
November 3, 2012 at 8:21am · Like · 4
အူကြောင်ြဲကြား ပါဂျောင်လူသတ်ပွဲ အကြောင်း တကယ့်အမှန်တရားကို ပြည်သူလူထူကြီးတရပ်လုံး သိရှိ ၊ ခံစား ၊ နားလည် နိုင်ရန် ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အသက်မသေဘဲလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ကိုညီညီကျော်၊ ကိုရဲလင်း ၊ မနန်းအောင်ထွေးကြည် စသည့် ကျောင်းသားဟောင်းများမှ အသေးစိတ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုကို မနန်းအောင်ထွေးကြည် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ပြုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူး နဲ့ မျက်နှာဖုံးစွပ် လူသတ်သမားများကို နောင်လာမဲ့မျိုးဆက် ကျောင်းသား ငယ်များသိရှိရန် ဖော်ထုပ်ကြပါစို့။
November 3, 2012 at 7:03pm · Like · 3
Yan Shin Aung လုံခြုံရေးလဲသတိထားဦး.။ ကုလားမိုးသီး ကအဖြစ်မှန်ပေါ်မှာစိုးရိမ်ပြီး လုပ်ကြံနေဦးမယ်.။
November 4, 2012 at 1:51am · Like · 3
Thant Zin ကျွန်တော် တို့၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ကြီးပြင်းရတဲ့ သူတွေအဖို့ တော့ အဲဒီ အကြောင်းတွေကို သိပ်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟိုတလောက မိတ်ဆွေတစ်ယောက် က မျှပေးလို့"ကျွန်တော်လူ့ ကတ်ဆက်" ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဖတ်နေရင်းနဲ့သူတို့ တွေရဲ့ဘဝ ကိုတွေးမိပြီး ဝမ်းနည်းမျက် ရည်ကျမိတယ်။ အဲဒီထဲကအတိုင်း အမှန်သာ ဆိုရင် တကယ့်ကို စက်ဆုပ်ရွံရှာ စရာကောင်းပြီး လူမဆန်တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ သမိုင်း တစ်ပုဒ်ပဲ။ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင် မျက်နှာစုံညီ ရှင်းလင်းတာကို နားထောင်ရရင်တော့ ဖြင့် ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။ သင်ခန်းစာယူရတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီထဲက အတိုင်းအမှန်သာ ဆိုရင်တာ့ သူတစ်ပါးကို ချောက်တွန်းခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက် ရင်လေးစရာပဲ။ ကျွန်တော် က ကံ၊ကံ၏ အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်။ သူတို့ တစ်တွေ ရဲ့ အကုသိုလ်ကံ ကတော့ မတွေးရဲစရာပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ပေးခဲ့၊ ဒုက္ခ ခံခဲ့ရတဲ့သူ တွေအတွက် စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ နောင်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်အနာ ခံမှု ကို ကျွန်တော် တို့ လူငယ်တွေ အမြဲ သတိရနေပါ့မယ်။ မနန်းအောင်ထွေးကြည် ကိုလည်း နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။
November 4, 2012 at 6:56am via mobile · Like · 5
Thaung Oo မိုက်တယ်
November 5, 2012 at 2:49am via mobile · Like
Nang Aung Htwe Kyi အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
November 5, 2012 at 11:12pm · Like · 6
정희 အမသတင်းတွေ့တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အခု သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်မှာ ဖတ်မိတဲ့စာအုပ်က မောင်မောင်(ရွေကရ၀ိတ်)ရေးထားတဲ့ " ကျွန်တော်သိသော ခေတ်သစ်ဟင်းသာကိုးသောင်းပုံပြင် " စာအုပ် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်. အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်. .နိုင်ငံရေးစာအုပ်ဖတ်ဖို့ ပျင်းလှတဲ့ သူတောင် အစ အဆုံး ကျော်မဖတ်ပဲ အကုန်လုံး ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.အဲဒီထဲမှာ အမရဲ့နံမည်ကိုလည်း တွေ့ပါတယ်. .အဲဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီး အမတို့ရဲ့ ABSDF အကြောင်းကိုလည်း သိခဲ့ရတယ်..အဲဒီထဲက အဖြစ်အပျက်တွေက တကယ်ပဲ ရက်ရက်စက်စက် ရှိခဲ့ပါသလား ဒါမှမဟုတ် စာရေးသူကပဲ ဖန်တီးရေးထားတာလား ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်..
November 6, 2012 at 4:50am · Like · 2
Nang Aung Htwe Kyi ဖြစ်ရပ်မှန်တွေနဲ့အမကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို စာအုပ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိကျမှု့ရှိအောင် မပပြန်တချို့နဲ့တိုင်ပင်ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ABSDF နဲ့ ABSDF-NB တခုလုံးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အမရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တာကိုဘဲရေးသွားမှာပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
November 6, 2012 at 6:51am · Like · 6
တာ တာ မခင်ချိုဦးအကြောင်းလဲ သိချင်ပါတယ် အစ်မ .. ကြားခဲ့ရတာ ဖတ်ခဲ့ရတာတွေ ဟုတ်မဟုတ် သေချာ သိချင်ပါတယ် .. စောင့်မျှော်နေလျှက်ပါ
November 6, 2012 at 6:57am · Like · 1
Myo Win လှမ်းလာခဲ့ပါ ပြည်မြန်မာ
November 6, 2012 at 9:21am · Like
အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား သြစီ စီတီဇင် ဖြစ်နေတဲ့အမငယ်ကို ဗီဇာ ဘယ်လောက်ပေးတုန်း ။
November 6, 2012 at 4:16pm · Like
Phyoko Naing အစ်မဘ၀ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းတွေကိုနားထောင်ချင်တယ်။ခွပ်ဒေါင်းပျိုကိုလေဆိပ်မှာလာကြိုမယ်။
November 7, 2012 at 2:39am · Like
November 2, 2012 at 9:14pm ·
ကျမ အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီ လို့ Australia သံရုံး မှ အကြောင်းကြားစာ
Email ပို့လာပါတယ် ။
ABSDF ဗဟိုတောင်ပိုင်းဥက္ကဌဟောင်း ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကို
မပ ပြန်မောင်နှမတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရတော့မယ် ။
ကျမ ရင်ထဲကအပျော်တွေကို မျှဝေပါတယ် ။
30Unlike · · Share
You, ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ, Ye Myint, Maungmaung Skw and 344 others like this.
Tin Ko Win အမကို အနော် ပြောဖူးပါတယ်ဂျာ
November 3, 2012 at 2:30am · Like
Ti Lay အောင်ထွေးရေအရမ်းရမ်းကိုဝမ်းသာတယ်အရမ်းပျော်ပါတယ်----
November 3, 2012 at 3:20am via mobile · Like · 1
Phyo Pyae Sone ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ....မြန်မာတစ်ယောက်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက အကောင်းဆုံးပါ ....
November 3, 2012 at 3:37am · Like · 2
Han Myint ရွှေတိဂုံဘုရား အမြန်ဆုံးဖူးခွင့်ရနိုင်ပါစေ သမီးရေ . . . ။
November 3, 2012 at 4:15am · Like · 2
Kyaw Zaya ၀မ်းသာပါတယ်
November 3, 2012 at 4:43am · Like · 1
Aye Sanda Linn အားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ အစ်မရေ...။ သိပ်ဝမ်းသာပါတယ်။
November 3, 2012 at 5:28am · Like · 2
လင်းသူ လွင် Welcome sister !!!!
November 3, 2012 at 5:52am via mobile · Like · 1
Thaw Dar This morning ,Happy new from friend ,,,Great sound ,,,,,,
November 3, 2012 at 6:27am · Like · 2
Nang Kham Mhom Warmly welcome sister!!!
November 3, 2012 at 7:57am via mobile · Like · 1
Cherry May Welcome home, sis.
November 3, 2012 at 8:21am · Like · 1
Aye Aye Thu ဝမ်းသာလိုက်တာ မငယ်ရေ.....
November 3, 2012 at 8:32am · Like · 1
Thay Thay Lay pyan gya par ...... shin do bai pyan gya par ....... di mhar tot.......
shwee phat ( nhat chee nan yan kat thwar than )
November 3, 2012 at 8:49am · Like · 1
Win Ko Ko Good
November 3, 2012 at 9:25am via mobile · Like · 1
Hnynn Hnynn Aye I'm so glad to hear that Aung Htwe Like I told you ... finally you will be landed Myanmar. Welcome home my dear friend!
November 3, 2012 at 10:40am · Like · 2
Soe Thein finally....a witness wil be home, for the sake of Truth & Justice. Takecare...Safe Journey...
November 3, 2012 at 1:51pm · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi Aye Aye Thu >> Hnynn Hnynn Aye >> Thaw Dar >> Thu Zar Win >> Nang Kyaw >> Ma May >> Par Gyi >> ခင်သန္တာ >> ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ .. NLD က ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေ .. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွဲကွာခဲ့ကြတာ ။တနေ့ ပြန်ဆုံကြမယ်လေ ။
November 3, 2012 at 2:28pm · Like · 2
Thaw Dar We want to be Reunion for S,H.S.(2) Kamayut....
November 3, 2012 at 2:30pm · Like · 2
Thi Han c u later Aung Htwe.
November 3, 2012 at 3:52pm · Like · 1
Min Thant Aung အမရေ အရမ်းဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ။ ဘယ်နေ့လောက် ပြန်လာနိုင်မလဲဆိုတာပါကြေညာပေးပါဦး။ လေဆိပ်မှာ လာကြိုချင်သူတွေ ကြိုနိုင်အောင်လို့ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ အမေ့ရဲ့ရင်ခွင်ဆီ...ပေါ့အမရယ်။
November 3, 2012 at 5:08pm · Like · 3
Ashin Sumangala ထပ်ထူထပ်မျှဝမ်းသာနေပါတယ်
November 3, 2012 at 5:38pm · Like · 1
Ad Thit သတင်းကြားရတော့ပျော်သွားတယ်
November 3, 2012 at 6:18pm via mobile · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi Thi Han >> ကိုငယ် .. တွေ့မယ် ။ မညီမ ဘယ်မှာလဲ ။ သတိရတယ် ။
November 3, 2012 at 6:48pm · Like · 1
Lotus Man Welcome back home sis!
November 3, 2012 at 6:49pm via mobile · Like · 1
Htay Aung Welcome.
November 3, 2012 at 8:34pm · Like · 1
Khin Soe Soe Win
glad to hear that and welcome ur return home !
November 3, 2012 at 10:44pm via mobile · Like · 1
Chit Thet Tun welcome to Motherland
November 4, 2012 at 1:06am · Like · 1
Zaw Win Htut I am so happy for that!
November 4, 2012 at 4:11am · Like · 1
Htun Aung Gyaw မငယ်အမေနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်နောင်ပြီးအမေ့ရင်ခွင်မှာနေပြီး " အမေ့အိမ်ကိုဘဲချစ်သမီးလွမ်းပါတယ် " ဆိုပြီးမချွဲနေနဲ့နော်။ အကိုအရမ်းဝမ်းသာတယ်၊မငယ်အတွက်ရောမငယ်အမေအတွက်ရော၊မပကရဲဘော်တွေအတွက်ရော၊အားလုံးအတွက်ဝမ်းသာမိတယ်၊ မပပြန်တွေဆုံတဲ့ပွဲကိုတက်ချင်ပါသေးတယ်၊ မငယ်ရောက်တော့တအားပေါ့၊ မငယ်အမေကအလွန်ချစ်စရာကောင်းပြီးရိုးသားတဲ့ ရှမ်းအမျိုးသမီးကြီးဘဲ၊ရန်ကုန်မှာတွေ့တော့အရမ်းလေးစားမိတယ်၊ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့သားသမီးတွေကစပိုင်ဖြစ်ရတယ်လို့ကွာ၊
November 4, 2012 at 8:40am · Like · 10
Myo Win မနန်းအောင်ကို ကြိုဆိုနေမဲ့ သူတွေထဲမှာ ကျနော်တို့လည်းပါတယ်နော် မပြီးသေးဘူး သေဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေအရေး လူသတ်ကောင်တွေ ၀န်ခံတဲ့အထိ ဆက်လုပ်ပေးပါဗျာ
November 4, 2012 at 9:02am · Like · 3
Min Tayza Congratulation
November 4, 2012 at 9:17am · Like · 1
ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ ရောက်လျှင် အကြောင်းကြားပေးပါ မငယ်ရေ ...။
November 4, 2012 at 9:34am · Like · 1
Maung Maung Kaung I am glad to heard that you are coming home. Finally you can be reunited with all love one
November 4, 2012 at 5:19pm · Like · 1
Kyi Moe congratulation A Ma .
November 4, 2012 at 6:45pm · Like · 1
Robert Hla Tun Welcome parama, I passed 10th at standard from BEHS2Kamayut at 1988, thanks for accept my friend request.
November 5, 2012 at 6:38am · Like · 1
Aye Aye Soe Win Do not forget to thank Aung Moe Win, your primary dramatist/writer --I mean seriously....In reality, one event leads to another. Unless we realize the importance of this chain of events, we have tendencies to trip..... This is universal...
November 5, 2012 at 4:30pm · Like · 5
Tun Naing Not only Aung Moe Win, but you too, Aye Aye Soe. I really like your comment. I'm also glad that she's back in Burma. Good luck, နန်းအောင်ထွေးကြည်...
November 5, 2012 at 4:50pm · Like · 3
Nang Aung Htwe Kyi စာအုပ်ထဲမှာ ရေးမှာတွေ မ Aye Aye Soe Win လုပ်မှဘဲ
အကုန်ပေါ်တော့မယ် ။ မဆီမှာတောင် ဓါတ်ပုံထည့်ခွင့်
ဘယ်လို စခဲ့တယ် ဆိုတာ အကုန်ပါမှာ မ ။၂၀၀၉ က စသဗျ ။
ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘယ်လို .... အဲ တော်ပြီ ။
November 5, 2012 at 6:14pm via mobile · Like · 3
Seint Seint Tun ဝမ်းသာပါတယ် အမ... အမေ နဲ့တွေ့တော့ ဗီဇာကိစ္စ ပြောဖြစ်ကြသေးတယ်.. ပျော်နေလောက်ပြီနော်...
November 5, 2012 at 6:47pm · Like · 1
Khin Mg Ye Sein ဝမ်းသာပါတယ်ညီမ..ရန်ကုန်ရောက်ရင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခံစား ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ ပြောပြပါအုံး
November 5, 2012 at 7:43pm · Like · 1
Ko Ko Myint ကျွန်တော်အစ်မရေးတဲ့ စာအုပ်ကို ထုတ်ချင်ပါတယ်
November 5, 2012 at 8:04pm · Like · 1
Aung Kyaw San ၀မ်းသာပါတယ်
November 5, 2012 at 9:43pm · Like · 1
Ah Ba Happy!!!!!!!
November 5, 2012 at 9:58pm · Like · 1
Paepae Eipae ထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်ညီမလေး
November 6, 2012 at 3:15am · Like · 2
Mai Thiri Ko Welcome Home !
November 6, 2012 at 8:22am · Like · 1
Sean M Gah Dome welcome back......soon ???? I'm hope.
November 6, 2012 at 10:55am · Like · 1
Maung Than Swe အမြန်ဆုံးပြန်ပြီး မိခင်ကြီးကိုတွေ့၊ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
November 6, 2012 at 5:01pm · Like · 2
Nu Nu Pe Tin အမရေ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ကြိုဆိုလျက်ပါ
November 6, 2012 at 10:22pm via mobile · Like · 1
Rooney Ko Myo ကြိုဆိုပါတယ် အမ
November 7, 2012 at 12:12am · Like · 1
Nay Myo Aung ma nge welcome back motherland and meet your old mother.
November 8, 2012 at 7:12am · Like
Moe Myat ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းသာပါတယ် အမ.. အိမ်အပြန်ခရီးမှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေနော်.
November 8, 2012 at 7:46am · Like